Ikhamera Yomzimba Ogqokile: Amaqhinga Azosiza Ezibhedlela - Izixazululo ze-OMG
Ikhamera Esebenzisa Umzimba: Amasu Azosiza Ezibhedlela
Emhlabeni wonke, abantu bangena esibhedlela nsuku zonke njengezisulu zokudutshulwa, ukugwazwa, nokushaywa, kanye nezidingo zezempilo ezihlobene nodlame. Amaningi amukelwa ukunakekelwa isikhashana noma isikhathi eside. Ezindaweni ezinabantu abaningi kangaka, udlame akuyona into obungayilindele. Kwesinye isikhathi iziguli zisebenza kabi nabasebenzi, izikhulu eziphezulu zimemeza ngezinsizwa noma abanye abantu abangahlobene nabo bangene ezibhedlela badale nodlame.
Ngokusho kocwaningo olwenziwe yi-International Association for Healthcare Security and Safety (IAHSS), cishe i-80% yezibhedlela idinga izinhlelo zokulawula ukufinyelela kanye nokuphuculwa kwe-CCTV. Abaphathi bezokunakekelwa kwempilo nabasebenza kwezokuphepha badinga ukufaka izixazululo zokubhekwa kwevidiyo ezithuthukisiwe ukuvikela iziguli, izivakashi, abahlengikazi, odokotela kanye nabasebenzi ezibhedlela, emahhovisi, ezikhungweni zokufukula, nasezindaweni zokunakekela izingane zesikhathi eside.
Amakhamera agqokwe umzimba angeniswe ezibhedlela ngenhloso yokuthuthukisa ukuphepha kwabasebenzi bezempilo. Amakhamera aklanyelwe ukuthumela umyalezo ocacile wokungabekezeleli nakancane kulabo abahlukumeza noma abahlasela abasebenzi esibhedlela.
Lezi amadivayisi ahlinzeka ukuphendula okukhulu ekuxhumaneni phakathi kwabasebenzi be-ambulensi neziguli. Abezimo eziphuthumayo bazibeka njalo ezimweni ezinzima nezinobungozi. Amakhamera asize ukuxhumanisa nozakwabo bamaphoyisa ukuqinisekisa ukuthi kuthathwa izinyathelo ngokulandela noma yiziphi izenzo zobugebengu ezibhekiswe kubasebenzi noma kwi-trust. Amakhamera omzimba asiza lapha ngokunikeza imidwebo yevidiyo engakhethi futhi evikelekile yemicimbi ehlangabezane nolayini ongaphambili. Izithombe zevidiyo zigcinwa ekhadini le-SD eliphephile elingasetshenziswa njengobufakazi obungamukelekayo enkantolo.
The okurekhodiwe kusuka kula makhamera kungasetshenziselwa ukuqeqesha nokuqeqesha, kanye nokusiza izinqubo zezokwelapha ezinhle. Amaqembu e-ambulensi angakwazi ukuzuza ngokufanayo ngokubuyekezwa okurekhodiwe ukuthuthukisa ukuphendula kwabo ezimweni nasekutholeni impendulo yesikhathi sangempela ukusiza ukwenza izinqumo ezisindisa impilo. Amakhamera nawo angasetjenziswa njengokwenza ukuqeqeshwa kwabasebenzi abasebasha bese ubakhombisa izinqubo ezikhethekile nokuthi kufanele baphendule kanjani kuzo.
Ama-paramedics babhekene nokuhlukumezeka ngamazwi nangokomzimba ngenkathi besemsebenzini, la makhamera asiza ekutholeni labo bantu. Amakhamera agqokwa ngomzimba ayindlela edumile ekuvikelweni kwabasebenzi ngaphambili. Abasebenzi bezimo eziphuthumayo banikela izimpilo zabo ukuvikela nokunakekela abantu ngezikhathi zabo kunesidingo esikhulu kakhulu futhi kunoma ngubani wabo ongaphansi kobutha noma udlame akakwazi ngokuphelele ukungabi nabulungisa.
Izinselelo ezibhekene nezibhedlela
Ukunikeza ukuphepha okungcono kweziguli, izivakashi nabasebenzi
Ukuhambisana nemiyalo kahulumeni kanye namakheji wokuphepha
Ukuvikela ukuvikela izinsolo zamanga nokushushiswa
Ukunqoba izingcindezi zesabelomali
Kuhlanganisa izinhlaka zokulawula ukufinyelela kanye nezinhlaka zokuphenya ngevidiyo
Imikhiqizo yamakhamera egqoke umzimba we-OMG
Uhlaka olunempilo, olusezingeni eliphezulu lokugcina kuwo wonke amadivayisi
Bukhoma ukulandelela ngohlelo lwe-GPS olwakhelwe ngaphakathi
Isitoreji sememori khadi ye-SD
Ukubuka okubukhoma nge4G
Ukubhalwa phansi kufakwe ngemfihlo futhi akunakuhlelwa
I-footage igcinwa izinsuku ezingama-31 ngaphandle kokuthi isicelo senziwa ukuthi siyigcine isikhathi eside
Sinikezela ngedivaysi, inzwa, ama-trackers, i-telemonitoring, ubuchwepheshe obungenawaya kanye namadivayisi wokulandela ekhaya wesikhathi sangempela kanye nokusebenza kwabo kodokotela
Amakhamera omzimba babe namandla okwenza ngcono ukusebenza nokwaneliseka ezinhlobonhlobo zemisebenzi ehlukahlukene. Uma kwenzeka kufundwa nabasebenzi bezokuphepha, ngokwesibonelo, amakhamera abonakalisile ukuthi abe nomthelela wokuthoba kumalungu omphakathi anolaka. Lokhu, futhi, kuthuthukise ukwaneliseka komsebenzi ngokwenza abasebenzi bazizwe bephephile emugqeni wabo womsebenzi. Ividiyo engezansi ikubonisa kahle lokhu.
Uma izithombe zibaluleke ngamagama ayinkulungwane, ividiyo ingabiza izigidi. Ukusakazwa bukhoma amakhono asemakhamera, vumela odokotela ukuthi bangekho esizeni ukuba banikeze izeluleko zezokwelapha kubezimo eziphuthumayo abahamba kumacala ayinkimbinkimbi phansi, uma kunesidingo.
Izibhedlela azifani nezinselelo zezokuphepha eziqondene nezimboni ezithile ezihlanganiswa ndawonye enhlanganweni eyodwa. Ngaphezu kwezindawo ezijwayelekile, izibhedlela zivame ukuba nezindawo zokudlela, izitolo zezipho, amakhemisi, ukubamba amaseli okwelashwa kweziboshwa nezindawo zokwelashwa kwengqondo konke okulethela izidingo zobuchwepheshe ezihlukile. Ngenxa yalokhu, ukuxutshwa kwamadivayisi okuphepha okuqinisekisa ukusebenza kwe-OMG kuvame kakhulu ukuthi kube kubanzi kunezinye izinhlobo zabaphakeli. Ividiyo, ukulawulwa kokufinyelela, ama-alamu, amakhamera agqokwa ngomzimba, namanye amathuluzi angasetshenziswa futhi ahlanganiswe ndawonye ohlelweni lokuphepha esibhedlela.
Izindawo zokupaka dinga ukucatshangelwa okukhethekile. Ukuba yi-24 -kusebenza kokusebenza kosuku, izindawo zokupaka izibhedlela zingathola umsebenzi oqhubekayo, okwenza ukuziphatha okumsolayo kube nzima kakhulu ukubona ebusuku. Ngaphandle kokuvimbela ukweba kanye namanye amacala, onogada basesibhedlela benza isiqiniseko sokuthi abasebenzi neziguli bazizwa bephephile. Ngemuva kwekhamera ye-CCTV egqoke umzimba iyindlela engcono kakhulu yokuthatha ividiyo ubusuku ekukhanyeni okuphansi nokusakazwa bukhoma kwamagumbi okulawula.
Isibhedlela isezindlela eziningi indawo yangasese, abanye abahlaziyi bancoma ukusebenzisa amakhamera womzimba ngesikhathi sokuhlinzwa futhi i-footage eqoshiwe ingabuyekezwa odokotela abanolwazi nodokotela abahlinzayo abasha, futhi isetshenziswe phakathi kokuqeqeshwa kwezokwelapha ukusiza ukugwema amaphutha ngokuzayo. Kepha e-Asia, kunezimo eziningi lapho odokotela berekhoda khona ukulethwa kwezinsiza bese belayisha amavidiyo emithonjeni yezenhlalo yokuthola izibuyekezo nabalandeli, ngakho-ke amakhamera agqokwa ngomzimba kumele abethelwe futhi neminyango yokunakekela ezempilo inemithetho nemikhawulo yokusebenzisa amakhamera omzimba ikakhulukazi indawo yezimo eziphuthumayo.
UGivot uthe “Uma umuntu esesidlangalaleni akukho okulindelwe ukuba wedwa, ngakho-ke ukuqoshwa kwevidiyo esidlangalaleni akuyona inkinga. Kepha uma umuntu exhumana nomhlinzeki wezempilo, kulindelwa ubumfihlo, ”.
Icala elisha lenzelwe esibhedlela iBergrywood, eqhutshwa yiNorthampton shire Healthcare NHS Foundation Trust. Inkampani eyiCallla yahlinzeka amakhamera we-12 Reveal camera, abebegqokwa ngabamatiku kanye nabophiko lwezokuphepha kulelo nalelo wodi elinhlanu lesiguli sabagula ngengqondo, kulandela ukuqeqeshwa. Bobabili abasebenzi kanye neziguli babheka ukuthi
Amadivayisi ethu atholakala emakethe ukuphepha kwezibhedlela neminye iminyango
Ukuhlolwa Kwezwi Lokuhlola Umsindo Womsindo
Ikhamera ye-Body Worn (Ukuphathwa kobufakazi beDivaysi)
Ikhamera ye-WIFI Mini / GPS / 3G / 4G Yomzimba Worn (BWC058-4G)
Ikhamera yomzimba engenantambo ye-3G / 4G (BWC004-4G)
Ikhamera Yomzimba Yomzimba Omncane Ngememori Yangaphandle (BWC055)
Ikhamera ye-Police Body-Worn Camera (BWC004)
Ikhamera encane ye-Mini Worn nge-Cryptography [Ayikho isikrini se-LCD] (BWC059)
Ikhamera yeWorn Worn, Isitoreji Sangaphandle - Ikhadi le-SD 32GB-128GB (BWC043)
Amahora Amade [I-16 Hrs] Ukuqopha Ikhamera Yomzimba-Ozelwe (BWC061)
Ikhamera encane ye-Mini Worn nge-Encryption [Nge-Screen LCD] (BWC060)
Ikhamera yekhamera ye-CCD (BWC054)
Ikhamera yeW Mini Body Worn - Super Video Compression (BWC058)
Ikhamera ye-Headset ye-Headset ye-Headset egqokekayo (BWC056)
Iqoqo le-Spy elifihliwe (Ukuvikeleka kwasekhaya)
Ukusetshenziswa kwamakhamera ekubhekiseni impilo yezengqondo "bekuzuzisa", kusho abaphenyi.
Iningi umphakathi uvame ukuvumelana ngokugqoka ikhamera yomzimba ukuthi bazokhathazeka ngokuthi kungenzeka yini ukuthi umuntu ongagunyaziwe, umuntu wesithathu athole ukufinyelela kulwazi lwabo lomuntu siqu, nokuthi bazokhathazeka ngokubandlululwa kwesikhathi esizayo ngenxa yokuthi kungenzeka badalulwe imininingwane yabo. Odokotela abaningi abavumelani nokuthi amakhamera omzimba azophazamisa ubudlelwano bodokotela neziguli kepha bazokhathazeka ngokuphepha kwemininingwane yeziguli zabo. Sekukonke, umphakathi kanye nodokotela babekuvumela ukuqaliswa kohlelo lwamakhamera agqoke umzimba, behlola ukuthi izinzuzo ezingaba khona zibaluleke kakhulu kunezingozi ezikhona. Iningi lomphakathi likholelwa ukuthi iziphathimandla kufanele zithole ukufinyelela okugcwele kwemininingwane kanti abasebenzi abahlengikazi, osokhemisi, abasebenzi baselabhoratri, nabanye ochwepheshe bezokunakekelwa kwezempilo kufanele bakwazi ukufinyelela kancane.
Manje ngokunikeza ucwaningo olwenziwa yizikhulu ezithile zezokwelapha.
Ngemuva kokuhlolwa emawadini ezempilo yengqondo, uhulumeni ufuna abosizo lokuqala basebenzise amakhamera. Ngo-2014, ukusetshenziswa kwamakhamera agqoke umzimba ngabahlengikazi kwahlolwa kuqala ezigcemeni ezimbili eBroadmoor, isibhedlela sabagula ngengqondo esiphezulu eCrowthorne, eBerkshire. Le mibhalo ihlinzeka ubufakazi bokuxhasa ukushushiswa kulandela izigameko zodlame lapho nokuncipha okuncane kwezehlakalo zokuhlaselwa kwabasebenzi nakho kuphawuliwe. Ngaphezu kwalokho, kube "nokwehla okuphawulekayo ekuziphatheni okungahambisani nomphakathi kanye nolaka", ngokusho kokhulumela i-West London NHS Trust, ephethe iBroadmoor.
UJim Tighe, uchwepheshe wezokulawula ezokuphepha eWest London NHS Trust, uthi amakhamera enze abasebenzi bazizwe bezethemba ngokwengeziwe. “Sisebenzise i-video izikhathi ezimbalwa zokubukeza izehlakalo ezinkulu futhi kusize kakhulu ukubona kahle nokuzwa okwenzekile. Kungasiza ukwehlisa ubude besikhathi lapho uphenyo luthatha ngoba uthola lowo msakazi ozimele, ”kusho yena.
Ngakho-ke, ngemuva kwengxoxo ende, sifunde ukuthi lonke ubuchwepheshe bunemiphumela ethile emihle nemibi, kepha amakhamera agqokwa ngomzimba anikeza izinzuzo eziningi ezenzakalweni ezimbalwa ezinganqoba ngobuchwepheshe. Ohulumeni kufanele banikeze isabelomali esengeziwe sokubeka ubuchwepheshe obusha emikhakheni yomphakathi. Abezimo eziphuthumayo bahlala bezibeka ezimweni ezinzima nezingaba yingozi. Futhi izinsimbi zomzimba zinganikeza ubufakazi obuqhamile bevidiyo bokuphila entanjeni yangaphambili.
Anon., Nd UKUZEZA. [Online]
Itholakala ku: https://www.salientsys.com/industries/hospitals-healthcare/
Umnyango Wezabasebenzi Wezokwelapha, A., 2018 Feb. I-NCBI ishicilelwe.gov. [Online]
Itholakala ku: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29331259
I-DeSilva, D., nd Zembula. [Online]
Itholakala ku: https://www.revealmedia.co.uk/5-ways-body-cameras-could-help-ambulance-staff
Itholakala ku: http://www.mhfmjournal.com/old/open-access/the-feasibility-of-using-body-worn-cameras-in-an-inpatient-mental-health-setting.pdf
I-Mei, TT, FEB 1, 2019, Ama-Straitstimes. [Online]
Itholakala ku: https://www.straitstimes.com/singapore/health/body-worn-cameras-for-scdf-paramedics
Morris, A., Meyi 30, 2019. Express & inkanyezi. [Online]
Itholakala ku: https://www.expressandstar.com/news/health/2019/05/30/ambulance-staff-to-wear-body-cameras-as-40pc-of-paramedics-attacked/
IMulholland, H., Wed 1 Meyi 2019. SEBESHA I-GUARDIAN. [Online]
Itholakala ku: https://www.theguardian.com/society/2019/may/01/body-cameras-protect-hospital-staff-patients-violence-mental-health-wards
Ukubuka okuphelele kwe-7321 Ukubuka kwe-5 Namuhla